Ny politika momba ny Famoahana Mpianatra Sekoly ao Kanada - Ny mpisolovava ny Philippines! Filipiana mpisolovava, an-tserasera rehetra.
Ny politika momba ny Famoahana Mpianatra Sekoly ao Kanada
Ny Bouchereau Lingua Iraisam-pirenena (BLI) dia nanolo-tena maka rehetra antonony dingana mba ho azo antoka ny mpianatra dia manana fahafahana tanteraka soa aman-tsara ny fandaharana. Ny mpianatra manao ny tsy fanohanana ny tanjona dia ny akademika sy ny etika ny BLI ho an'ny tenany sy ny mpiara-mpianatra dia mety ho iharan'ny sazy, ary anisan'izany ny fandroahana
Amin'ny ankapobeny, miezaka ny BLI mba hamaha ny toe-draharaha raha tsy misy ny fandroahana.
Ny teny izay fampitandremana, voasoratra fampitandremana sy fampiatoana mety mialoha ny farany, ary tena goavana ny asa.
Raha ny BLI mino fa ny tsy fivadihany, ny fiarovana, na hahasoa ny mpianatra, ny mpiasa, ny mpanjifa na ny vahiny hafa no tandindonin-doza, ny fandroahana dia navoaka tao amin'ny fisainana mazava ny sekoly na oviana na teboka ao amin'ny dingana.
Ny tsy fahombiazana ny vola overdue kaonty noho ny BLI ao anatin'ny fe-potoana manokana dia afaka ny ho fototry Ny fihinanana ny Rongony tsy azo atao amin'ny fananana ny am-pianarana, any am-pianarana ny zava-nitranga, asa na mandeha sy excursion amin'ny na iza na iza, na mpiasa na ny mpianatra. Misy tsy ampy taona, ampy taona izay ny mpianatra izay manana, mampiasa, mivarotra, na mizara ny ara-dalàna (oh.
Ny rongony, fanafody, sns.) Na tsy ara-dalàna ny zava-mahadomelina, ny fampiasana zava-mahadomelina, toaka sy ny paraky na oviana na oviana raha mbola eo am-pianarana fananana, na eo an-tsekoly ny fahefana, ny foto-kevitra lehibe indrindra famaizana asa, ao anatin'izany ny fampiatoana na ny fandroahana.
Ny sekoly politika amin'ny zava-mahadomelina sy ny toaka koa mihatra rehetra fitsangatsanganana sy ny hetsika ny mpianatra. Ny sekoly tahirin ny zo hitady ny misy ny fananana ny mpianatra raha izay ny mpianatra no noahiahiana ho zava-mahadomelina na ny zavatra tsy ara-dalàna na ny zavatra any an-tsekoly, ny fitsidihana sy fiaraha-mientana. Ny mpianatra nino ho eo ambany fitarihan'ny ny zava-mahadomelina sy - na toaka no vokany lehibe ao anatin'izany ny fampiatoana na ny fandroahana. Ny mpianatra rehetra dia tsy maintsy manaraka ny fehezan-dalàna momba ny fitondran-tena ny BLI. Na dia ny tapaka no tsy mety hiteraka fahavoazana ara-batana ny olona na fananana, dia mety ho esorina BLI ny mpianatra izay nahazo fampiatoana noho ny tsy fanarahana sy nanomboka nandika misy fepetra ny fehezan-dalàna momba ny fitondran-tena ny BLI. Tsy efa nahazo lalana avy amin'ny BLI ny herisetra na fanavakavahana na mpianatra, mpiasa sy ny mpiasa mpanjifa na ny mpitsidika ny sekoly. Ny mpianatra, izay nandray anjara tamin'ny herisetra na asa fandresen-dahatra fa ny firazanana, ny firaisana ara-nofo, na mikasika ny fironana ara-nofo dia ho azo iadian-kevitra avy hatrany ny fampiatoana arakaraka ny hamafin'ny ny asa sy eo am-piandrasana ny fanadihadiana. Misy mpianatra izay heverina fa ny famotorana dia nifantoka tamin'ny lehibe herisetra na asa tsy misy fanavakavahana mety ho voaroaka ao amin'ny tapa-kevitra ao am-pianarana, arakaraka ny hamafin'ny ny asa. Amin'ny famaritana ny zavatra fototry ny herisetra na fanavakavahana, ny BLI dia manondro ny Sata mifehy Ny Quebec zon'olombelona sy ny Fahafahana. Ny mpianatra ihany koa ny fahavoazana, hangalatra, na raha tsy izany ny fampiasana ny fananana ny sekoly dia mety ho voaroaka sy Ny BLI dia manolo-tena ho amin'ny marina rehetra sekoly mpiasa, mpianatra, mpanjifa sy ny mpitsidika mba ho azo antoka. Mpianatra izay amin'ny alalan'ny asa, na tsy miraharaha na inona na inona fomba mety hampidi-doza ny filaminan ny tenany na ny hafa dia ho esorina. Mpianatra iharan'ny fandroahana noho ny antony dia ho nampahafantarina an-tsoratra, na amin'ny alalan'ny mailaka, ny taratasy nomen ny tanana na ny voasoratra mail. Ny BLI dia tsy mendrika noho ny tsy fanaterana ny voasoratra mail raha ny mpianatra dia tsy nanome toeram-ponenana manan-kery ny adiresy. Ny fampahafantarana dia misy ny famaritana ny fototra ho an'ny fandroahana sy ny daty mahomby. Amin'ny bato izay mpianatra mba nagpapalaban amin'ny zava-misy ny fandroahana tsy maintsy miantso ny fanapahan-kevitra ao anatin'ny telo andro manomboka ny fampahafantarana rehefa ny fomba ny fitarainana ny BLI omena ny mpianatra sy ny fanomezana ampy ny porofo manohana ny fitoriana. Ny mpianatra izay nametraka ny antso ary dia nahomby ireo heverina ho misintona avy BLI Ny fandaharana ny tantara ny mpianatra, ny mpianatra izay voaroaka, dia ho vita eo ambany ny Politika Refund ny Sekoly, ny daty mahomby ny fandroahana araka ny andro farany ny mpanatrika ny fandaharana ny fianarana.
Ny mpianatra izay voaroaka dia tompon'andraikitra ny fiverenan'ny misy ny fananana ny sekoly tao amin ny zara-tany ao anatin'ny folo andro ny fandroahana ary natao tompon'andraikitra ara-bola ho an'ny rehetra ny fananana tsy niverina tany amin'ny toe-javatra tsara.
Aostralia, mitandrina ny olom-pirenena izy ireo any Filipina
Goji Cream Philippines - buy, price, reviews